Beesha Karanle ma u baahantahay isbadal siyaasadeed mise duligii ay ku jirtay ayay weli dooneeysaa inay kusii jirto? | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	Beesha Karanle ma u baahantahay isbadal siyaasadeed mise duligii ay ku jirtay ayay weli dooneeysaa inay kusii jirto?
Posted on January 31, 2016 by wacyigelin	Beesha Karanle oo ah beel weynta Hawiyey awoodna ku lahyed siiyaasade dalka ayaa waxii ka danbeeyey 2006 noqotay beel la adeegsado hadana helin xaquuda iyadoona lagu tuntay xaqiiqii ay ku laheyd maamulada xiligaan ka jira Soomaliya
Beesha Karanle ma u baahantahay isbadal siyaasadee mise duligii ay ku jirtay wali doonee
Beesha Karanle oo ah beel weynta Hawiyey awoodna ku lahyed siiyaasade dalka ayaa waxii ka danbeeyey 2006 noqotay beel la adeegsado hadana helin xaquuda iyadoona lagu tuntay xaqiiqii ay ku laheyd maamulada xiligaan ka jira Soomaliya.
Beesha ayaa waxaa hor boodaayo 7 xildhibaan oo aan wax aan dantooda aheyn ka shaqaynin iyagoona beesha ka dhigtay mid ay u adeegsadaan danahood gaarka ah hadana aanan waxba u qaban waxeyna beesha u kala qeybiyeen jufo jugo iyagoo isticmaalay habaka loo yaqaan qeybi oo xukun.
Beesha xiligaan waxaad moodaa in ay hurdada kasoo toostaysoo tooseen lana doonaayo xilligaan in laga hor tago in xildhibaanadii hore dib ay ugu soo noqdaan mar kale masraxa siyaasadda iyagoo adeegsanaayo dhaqaale siday markii horeba u adeegsadeen.
Aqonyahanno badan ayaa xiligaan doonayo in uu dhaco isbadal kadib markii ay xildhibaanadii hore ku fashilmeen adeega deeganadooda sida degmada Ceel buur iyo deegaanada ku hareereeysan, degmada Galhareer iyo deegaanada ku hareereeysan, Gobolka shabeelada hossee iyo weliba gobolka Banaadir. Xildhibaanada Murusade waxba uma qaban deeganadaas aan kor ku sheegnay oo ay kasoo jeedaan hadana waxay weli u hanqal taagayaan in ay mar kale dib ugu soo noqdaan siyaasadda. Haddaba ma xalbay inoo tahay taasi hadii aanu nahay beesha Murusade?
Aqoonyahanada ayaa u mahad Celiyey Xildhibaanka Glmudug ee Beesha Kanranle Mahad Cibaar iyagoona ku amaanay hoowsha wanaagsan ee uu qabtay kuna baaqay in xildhibaanada mustaqbalka imaan doona ay ku daydaan.
Aqoonyahannada ayaa ku baaqay in la helo isbedel siyaasadeed lagana hortago in mar kale ay soo noqdaan xildhibaannada daneystayaasha ah ee u adeega beelaha kale waxna aan u qaban dadka ay metalaan ee ay magacooda ku heleen martabadda ay hayaan maantay.
fadlan ku biir kooxaha isbedel doonka beesha Kanranle si mar danbe aysan u dhicin waxii horey u dhacay oo kale
Runti waa sida uu sheegay qofka maqaalka qoray laakiin baahidu ma ah in la bedelo xildhibaanada oo keliya balse waa in la bedelo heykalka siyaasadeed iyo oday dhaqameed oo dhan. Waxaan la soconaa in siyaasadda Murusade iyo oday dhaqameedyada in badan oo ka mid ah ay u afduubanyihiin xildhibaanada iyo siyaasiyiin kale oo iyagu martabadda ay ku heleen magaca Murusade ka dhigtay sidii dukaan ay leeyihiin oo ciddii ay rabaan wax ka iibiyaan ciddi kalena albaabka ka xirta. Waxay raggan qaar ka mid ah gaareen heer ay shirqoolo maleegaan si ay uga takhalusaan cid kast oo fikirkooda gurracan kasoo horjeeda. Sida maqaalka lagu sheegayba maantay Murusade uma madax banana ka qayb galka siyaasadda iyo raga uu u dirsanayo oo si dhab ah u metelaya. Rab baa isu biirsaday si ay iyagu u hor boodaan siyaasadda uguna manaafacaadsadaan oo laaluush ka qaataan nin walba iyo ninkii doonaya inuu ku biro dowladda.Sidoo kale raggani waxay ka fuliyaan Murusade dhexdiisa danaha dowladdu ay ka leedahay xitaa haday qaldanyihiin iyagoo taa dhaafsanaya jeeb buuxsi.
Haddaba waxaa taa aad uga dhiidhiyay rag badan oo ka tirsan odayaasha Murusade, wax garadkooda iyo aqoon yahanadooda. Shirar badan oo la qabtay waxaa ka mid ah shirkii lagu qabtay Dayniile ee Abakar ku dhisteen guddi metela kadib markay arkeen sida gurracan ee ragga afduubay siyaasadda Murusade iyo oday dhaqameedyo ay iyagu jeebkooda ka keensadeen ay isku dayeen inay wixi damacooda ah ku meel mariyaan. Taas waxaa kasoo baxday natiijadii lagu doortay guddiga abakar oo uu gudoomiye ka ahaa Nabaddoon Cabdi Macallin. Raggan ku heeshiyay inay Murusade afduubtaan waa u cuntami waysay inay arkaan Murusade oo danihiisa u istaagaya. Runti, guddiga Abakar damaciisu wuxuu ahaa in beel hoosaad kasta oo Murusade ka tirsan ay soo dhsato guddi ay iyagu raali ka yihiin si dhab ahna u metela. Taas waxay oodin lama filaan ah ku noqotay raggan caada qaatayaasha ah. Sidaad ogtihiinba waxaa dhacay dhowr isku dhac oo u dhexeeya laba kooxood. Koox waxaa ka mid aha guddiga Abakar, odayaal, aqoonyahanno, iyo siyaasiyiin ka tirsan qayb kasta oo Murusade ah. Haddaba isku dhicii ugu danbeeyay wuxuu ka dhacay Cadaado. Nabadoon Cabdi Macallin oo aad uga soo carooday sida wax u socdeen ayaa kusoo noqday Xamar. Nasiib daro,raggan oo u arkayey inuu caqabd ku yahay wadana danaha Murusade iyo weliba iyagoo aaminsanaa inuu abaabul guud oo lagu mideenayo Murusade wado ayaa soo maleegay shirqool looga takhalusayo nabadoon Cabdi Macallin. Inta badan Murusade way ogyihiin maantay raggii dilay Cabdi Macallin Maxamuud waxaana ugu horeeeya xildhibaan Xassan Macallin, Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi( Ugaaska si gooni ah ayaa loogu eedeynayaa inuu qaybta ugu wayn ka qaatay maadaama ay asaga iyo marxuumku iskugu hanjabeen shirkii cadaado ugaaskuna ku dhaartay inuu dili doono Marxuuma Cabdi Macallin), iyo Iibaan Jimcaale Faarax oo ay siku laf yihiin marxuumka. Waxaa soo ifbaxaysa in rag fara badan oo maantay odayaal Murusade isku tilmaamaya ay ogaal u ahaayeen dilka Cabdi Macallin Maxamuud. Tusaale u qaado in nin oday ah oo maantay meel kasta ka qaylinaya uu tacsi diray isagoo weli marxuumku uu noolyahay taas waxay cadaynaysaa in uu ogaa in la dili rabo. Sidoo kale Iibaan Jimcaale ayaa asagoo jooga Cadaado la wacay iyadoo loo sheegay inuu la fuliyay howshii uu isku duba ridayey. Runti Iibaan marka la wacay weli marxuumka nafta ayaa ku jirtay. Waxaa dhacaday inay soo direen nin dhalinyaro ah si uu usoo hubiyo inuu dhintay iyo in kale. Iibaan weligii wuxuu ka maseeyrsanaa oo aad u necbaa Cabdi Macallin oo uu u arkayey caqabad ka hortaagan inuu ku amuur ku taagleeyo lafta ay kawada dhasheen ee siciid Abakar Nasiib daro Iibaan cid aaminsaneeyd ma jirin oo horay ayaa loo ogaa inuu yahay nin caado qaate ah taas ayaana keentay in mar kasta oo guddi la doortaba laga tago asaga. Tusaale, ninka laga dhigay guddomiyaha Siciid Abakar markii Cabdi Macallin loo doortay Gudoomiyaha gudiga Abakar waa nin ay Iimaan aad isugu dhow yihiin sababt ninkaas looga door biday Iibaanna waxay ahayd iyadoo loo arko nin aan lagu aamini Karin arimaha Siciid abakar oo wax walba ka door bidaya wixi asaga dhuuntiisa mar oo keliya. Dheef jecli waxay ku kaliftay inuu shirqoolka Cabdi Macallin wax ka abaabulo weliba qaybta ugu wayn ka qaato. Anigoo dareensan in loo balan qaadaay Iibaan inuu noqonayo ninka Abakar meteli doona haduu ka qayb qaato shirqoolka Cabdi Macallin welibana abaal gud lacageed la siin doono. Iibaan ilaa waa nin dhuuni dilataye asagoon sii fikin oo aan fiirin waxa imaan kara falka noocan ah ayuu aqbalay arintaas.
Xassan Macallin oo ah nin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka waa nin Abakar ah oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku mashquulsanaa Xisbiga daljir ee uu aas aasay. Xassan Macallin waa nin aala Sheekh ah oo aaminsan inuu soo noqdo Sh. Shariif doorashada soo socota. Lacag aad u fara badan ayuu qarash gareeyay labadii sano oo la soo dhaafay oo ah malaayiin doolar. Xassan Macallin waa nin dad u shaqeeynaya asaga dantiisuna ay tahay inuu jago muhiim ah ka helo dowladda looo dooran doono Sheekh Shariif 2016. Si uu taa ugu sii gogol xaaro waxa uu wadaa qorshe looga takhalusayo cid kasta oo fikirkiisa iyo fikirka asxaabtiisa ay isku qadiyadda yihiin ee ah jeebka buuxso jagadana yaynan Murusade kaa qaadin. Cabdi Macallin iyo gudiga Abakar ayuu u arkayey caqabad hor taagan hamigiisa. Taas waxaa uga sii darnayda raggan k midoobay jeeb buuxsiga iyo kursi isi siinta inay ka baqayeen in lafaha kale ee murusade ay ku daysadaan Abakar oo ay sameeystaan gudiyo tayo leh oo wax goyn kara taasna keento in iyaga meesha laga saaro. Ugaaska ayaa asna taa u arkayey dhib wayn oo kusoo fool leh maxaa yeelay ugaasku nin Murusade isla scoda doortay maaha ee waa nin walaalkii booska ka qaatay iyadoo ay garab gelayaan rag siyaasiyiin iyo ganacsato ah oo iyagu danahooda ka dhex arkay Ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi Ugaas Faracadde. Ugaaskii hore waxaa laysugu daray handadaad iyo laaluush uu bixiyay nin aan magaciisa oo saddexan haayo. Raggan siyaasiyiinta iyo ganacsatada ah waxay ogaayeen inuu Ugaaska cusub yahay nin u dhega nugul ninkii jeebka u buuxiya. Tusaale, mar odayaal Foorculus ah ay eedaynayeen Ugaaska waxay ku eedeeyeen inuu guryo ka dhistay laaluushki uu ka qaatay dadkii dowladda ku biirayey ee Murusadaha ahaa iyadoo aan loo eegin aqoontooda iyo kartidooda balse loo eegay yaa jeebka ii buuxin kara. Arinta ugu ceebta badan waxay ahayd markii kuraastii baarlamaanka ee loogu tala galay karanlaha iimeey ee ay Murusadaha walaalaha yihiin uu gatay ugaasku. Ugaaska iyo ragga ay isku kooxda yihiin wax wayn lama aha inay Murusade iibiyaan maalin cad iyagoo weliba sameeyay taas maadaama ay Murusade ka dhigeen dad u adeegaya qabiilooyin kale. Xassan Macallin waxaa lagu hayaa cadeeymo fara badan inuu qayb wayn ka qaatay dilkii Cabdi Macallin.
Ninka gacanyaraha u ah Xassan Macallin Waa Badri Xeeyle Cabdi Bariise oo degan Ingiriiska. Badri Xeyle hadda ka hor mar uu dad la sheekeeystay waxaa uu u sheegay inay siyaasadda Murusade gacantooda ku jirto ciddi u baahan inay ka qayb gashana ay kla xaajoon karto iyaga. Asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri, “Odaygii ugu qaylada badnaa Murusade oo laga baqayey waa ka takhalusnay intii kalena dhuudhuumasho ayay ku jiraan.” Badri wax wayn ayuu ka ogaa dilka Marxuum Cabdi Macallin. Waxaa in badan oo idinka mid ah ay ogtahay in Badri uu Xamar joogi jiray berahan danbe asagoo la shaqeeynaya xildhibaan Xassan Macallin oo maalmahaan lacagta kala hurgufaya sii uu u meel mariyo danaha Aala Sheekh ee doorashada sanadka soo socda. Badri asagoo sacoobooleey ah ayuu xamar iska mushaxi jiray. Laakiin sidi ay u dileen Marxuu Cabdi Macallin asaga iyo kooxdiisu wuxuu bilaabay inuu maleeshiyo waardiyeysa shaqaaleeysiiyo oo mar kasta la socota. Taasi miyaanay cadeeyn wayn ahayn? Midda kale ee xusidda mudan waxay tahay in Badri Xeeyle iyo Xassan Macallin ay dhowaan tageen Ingiriiska oo ay ka shaqaynayeen sidii loo kala fur furi lahaa Abakar si aan iyaga loog a soo horjeesan. Taasina waa cadeeyn kale ianay qayb ka ahaayeen dilka marxuumka.
Haddaba isku soo gunaanadoo, waxay u taalaa arintu Murusade. Cabdi Macallin waqtigiisa ayaa dhamaaday allahan u naxariisto. Laakiin Murusade hadii aanay iska qaban raggan noocaan ah oo hunguri siisanay nin doorkooda iyo danahooda guud waa mid sababi karta in marka danbe magaceena hoos u dhigta oo cadaw kasta nasoo haweeysto maadaama aanan dadnimo aan iskaga celino wixi dhib noo gaysanaya aanay nugu jirin. Nimankan hadaad runta rabtaan Murusade magaceey ka yihiin ee murusade qalbiga kama qalbigoodu wuxuu la shaqeeyaa dhuuntooda wixi aan dhuuntooda marynina lama wanaagsana. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin sooru qaaday iyo nin seefu qaaday yaa daran iyadoo jawaabtu ahayd nin sooru qaaday ayaa daran maxaa yeelay sariig iyo xishood male qofku markuu dhuuntiisa wixi mara ku fac noqdo. Haddaba maantay Murusade weyne ayay u taalaa inay iska qabtaan ragga doonaya inay jeebka gashadaan Murusade dad kalena ugu shaqeeyaan oo danohooda ku meel mariyaan. Waxaan aaminsanahay hadii aanan inta goori goor tahay aan layska qaban doqontaan maradeeda dhigata maalinba meeshii dheef lagu sheego in aan weligeena ku jiri doono ceeb iyo dulli. Waxaan aad ugu faraxsanahay in walaaleheena Habar Maxamad ay arkeen dulmiga iyo dhibka ay Murusade ku hayaan raggan. Waxaan rejaynayaa in laf kasta oo Murusade ka mid ah ay qaadato talaabada ay qaateen walaaleheen si looga hortago dulliga in nala geliyo la doonayo. Waxaan rejeynayaa in an la qabiileeyniin arintan maadaama raggani aanay jirin cid Murusade ka mid ah oo ay u danaynayaa jeebkooda mooyaane.
Filed under: Uncategorized « MADAXWEYNE XASSAN IYO BAROORDIIQIISII REER KENYA IYO MXAA DHACAY OO BARWAREEDYADU UGA HADLI LA’YIHIIN DUQAYNTA KENYAATIGU KU HAYAAN DADKA REER GEDO!!! BEESHA MURUSADE OO DIGNIIN U DIRTAY WASAARADA ARRIMAHA GUDAHA (Qoraal+Sawirro+Cadeymo Dheeraad ah) »